သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်စုဆောင်းမှုအပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယပါတီဝန်ဆောင်မှုရောင်းချသူ (ထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်, ခွဲ clearinghouses နှင့်ဘဏ်များ) သူကိုခရက်ဒစ်ကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုများပေးစေခြင်းငှါ, အာမခံ, နှင့်အာမခံငွေန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်ဤအချက်အလက်စုဆောင်းစေခြင်းငှါ. ကျနော်တို့ကဤတတိယပါတီများထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုဘယ်လိုထိန်းချုပ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအနေဖြင့်သူတို့အဖို့ထောက်ပံ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုဘယ်လိုထုတ်ဖော်ရန်သူတို့ကိုမမေးကြဘူး. Some of these third parties may be intermediaries that act solely as links in the distribution chain, and do not store, retain, or use the information given to them.
Authorized Customer များနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်သည်အခြား Authorized Customer များနှင့်အတူအလားအလာအရောင်းအအကဲဖြတ်ရန်ဆန္ဒရှိသူကိုအခြားအ Authorized Customer များနှင့်အတူမျှဝေစေခြင်းငှါ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များအကြောင်းကိုစုစည်းသတင်းအချက်အလက်မျှဝေနိုင်ပါသည်, ငါတို့လာရောက်လည်ပတ်သူများ၏အသက်အပိုင်းအခြားနှင့်စာရေးဆရာ Customer များအပါအဝင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်အေဂျင်စီများနှင့်တတိယပါတီရောင်းချသူနှင့်အတူ. ငါတို့သည်လည်းသတင်းအချက်အလက်ကိုလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ငါတို့အားဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားသရုပ်ဆောင်မဆိုအေဂျင်စီကဆက်သွယ်မေးမြန်းခံရ "ဖယ်ထုတ်" ကိုအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ wysluxury.com အားဖြင့်ကောက်ယူခွဲခြားသိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းဆည်းထားနှင့်အထက်ညွှန်ပြအဖြစ်အသုံးပြုရန် မှလွဲ. wysluxury.com ၏တတိယပါတီများမှသို့မဟုတ်န်ထမ်းမှမရယူနိုင်ဖြစ်ပါသည်.
စုဆောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်. ဧည့်သည်များမှမရရှိနိုင်ပါကဘာလဲရွေးချယ်မှုများမှာ, သုံးပါနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေ?
wysluxury.com ထဲသို့ဝင်ခြင်းနှင့်စျေးသည်၏နံပါတ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်များနှင့်အခြားဆက်နွယ်ပေါင်းစည်းမှုထဲသို့မဝင်ရဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်. ထိုသို့သောရောင်းချသူဝန်ဆောင်မှုအရည်အချင်းပြည့်မီဘို့ Authorized Customer များအကဲဖြတ်များအတွက်အခြေခံကိုသိရန်လိုအပ်အပေါ်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိစေခြင်းငှါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကဤအချက်အလက်များ၏၎င်းတို့၏စုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုမဖုံး. ဥပဒေနှင့်အလိုက်နာရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်. We will disclose Personally Identifiable Information in order to comply withacourt order or subpoena orarequest fromalaw enforcement agency to release information. We will also disclose Personally Identifiable Information when reasonably necessary to protect the safety of our Visitors and Authorized Customers.
တစ်ဦးဧည့်သည်ဆိုက်ကစုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေး delete သို့မဟုတ်ပိတ်ထားနိုင်သလား?
ကျနော်တို့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဆိုက်ရဲ့ဒေတာဘေ့စကနေကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး deactivate / ပယ်ဖျက်ဖို့တစ်ယန္တရားနှင့်အတူဧည့်သည်များနှင့် Authorized ဖောက်သည်များကို. သို့သော်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျက်ခြင်း၏ Backup တွေကိုနှင့်မှတ်တမ်းများ, အချို့ကျန်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆက်ပြီးမရှိဘဲဧည့်သည်ရဲ့ entry ကိုဖျက်ပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည်. ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေးပိတ်ပြီးရှိသည်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူတစ်ဦးချင်းဤအချက်အလက် function ဖျက်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်, ကျနော်တို့ရောင်းချမည်မဟုတ်, လွှဲပြောင်း, သို့မဟုတ်ရှေ့ဆက်ရွေ့လျားမဆိုလမ်းထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စပ်လျဉ်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များနှင့်စာရေးဆရာ Customer များဆိုက်ပေါ်မှာဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေပို့စ်တင်ငါတို့ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးပါလိမ့်မယ်. သို့သော်, ကျွန်တော်တစ်ဦးထုံးစံ၌ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒအပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်လျှင်ဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ယခင်ကထုတ်ဖော်မရမေတ္တာရပ်ခံခဲ့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေးထုတ်ဖော်စေခြင်းငှါ, အဲဒီလိုဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ဖော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ခွင့်ပြုထိုကဲ့သို့သောဧည့်သည်သို့မဟုတ် Authorized ဖောက်သည်ကိုဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်.
ကို http://wysluxury.com တခြား web site တွေဆီသို့လင့်များပါရှိသည်. သင်တို့သည်ဤလင့်ခ်တစ်ခုပေါ်တွင် click လုပ်သည့်အခါကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ, သင်သည်အခြား web site ကိုမှရွေ့လျားနေကြသည်. ကျနော်တို့ဟာသူတို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒများငါတို့ဥစ်စာထဲကနေကွာခြားစေခြင်းငှါဤဆက်နွယ်နေဆိုဒ်များတွေရဲ့ privacy ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့သငျသညျအားပေး.